Usebenzisana nabaphesheya umculi osafufusa | News24
Usebenzisana nabaphesheya umculi osafufusa
isithombe: sithunyelwe Umculi osafufusa waseGamalakhe uSifiso Khowa odume ngelika FreshBii.
USIFISO Khowa ungumculi osafufusa waseGamalakhe ngokokuhlala owaziwa ngelika FreshBii. Uthi kuyintokozo enkulu ukuba agcine eselutholile uxhaso lokwenza icwecwe (album) lomculo wakhe.
“Ngaqala ukucula ngonyaka we-2007 lapho ngangicula nabangani bami abathathu. Kusukela ngalowo nyaka bengizama ukuzethula kubantu abangangisiza ukuthi nami ngigcine sengiqophe owami umculo,” kusho uSifiso.
Ulandise iFever ukuthi usebenzisana noSkhulu Miya ophrojusele umculi wodumo uSifiso Ncwane kanye noYoung Rezo waphesheya kwezilwandle kanye no Brendon Prevo wasePhiladephia phesheya.
“UBrendon Prevo ongomunye wabaculi be-RnB baphesheya engibambisene nabo. Ngaxhumana nabo kuRadio Sunny South lapho ngisizwa khona uK.C,” kusho uSifiso.
Icwecwe lika Sifiso lizophuma maduzane elinengoma yakhe ethi Halala right there ekoyiyona asebenzisana noYoung Rezo kuyona.
“Ingoma yami ethi Halala right there iqhamuke ngesikhathi ngidlula esimweni esinzima lapho abangani bami bengilahlile futhi bekhuluma ngami.
Ngalengoma ngidlulisa umyalezo othi ngiziwile bengikhuluma ngakhetha ukuthula ngiqhubeke nephupho lami ngibheke lapho phokophelele khona,” kusho uSifiso.
Uthe umculo iwona msebenzi wakhe azibona ukuthi uzophelela ngawo ngaphandle kokuya esikoleni, yize umndeni wakhe ukuphikisa lokhu.
“Umndeni wami awuthandi ukuthi angifundi. Uthi angiyeke umculo ngibhekane nemfundo ukuze ngithole umsebenzi oholelayo kepha mina angiziboni ngenza enye into ngaphandle komculo.”
Uthe baningi abantu abamsizile ukuze icwecwe lakhe ibe impumelelo.
“Kusukela ngisafunda eGamalakhe TVET bekunabantu abangangilahlanga abebehlezi bengeseka ngezimali nangeziyalo abafana noNokwazi noBavelile Mehlwana. ngesikhathi ngisafunda eTvet ngenza ingoma engayicula nabanye abafundi engangifunda nabo elibizwa Back to the Roots, abawuthandayo umculo.”
Uthe abafuna ukuzwa umculo wakhe bangaxhumana naye ngocingo ku 0720350630 noma ku-email ethi: freshbii@gmail.com